Thousand Islands Travels -9Days Australia Great Cities - Myanmar Travel Agent
9 Days Australia Great Cities
MI 519 G 12APR2RGNSIN HK32 1730 2205 *1A/E*
SQ 231 G 13APR3SINSYD HK3230045 1025 *1A/E*
VA 935 Q 16APR6SYDBNE HK3221100 1230 E*
VA 736 Q 18APR 1 OOLMEL HK32 1 1150 1415 E*
SQ 218 G 21APR4MELSIN HK3220005 0600 *1A/E*
SQ 998 G 21APR4SINRGN HK3220755 0920 *1A/E*
Day 01 : Yangon – Bangkok – Sydney
Day 02 : Sydney City Tour (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ)
ဆစ်ဒနီမြို့သို့ရောက်ရှိပါကကားဖြင်. လာရောက်ကြိုဆိုမည်ဖြစ်ပြီး ဆစ်ဒနီမြို့၏အလှပဆုံးနှင့်အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သောအလွန်လှပသည်. တော်ဝင်ရုက္ခေဒေပန်းဥယျာဉ်၊Opera House, Darling Habour, နှင့် Sydney Habour Bridge ပတ်ဝန်ကျင်လှပသောနေရာများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာပါမည်။ဆစ်ဒနီမြို.ရှိငါးဈေးကိုလေ.လာပြီးနေ့လည်စာကို Sydney မြို့ဆိပ်ကမ်းအလှကိုကြည့်ရှု့ခံစားရင်းသုံးဆောင်ပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Darling Habourနှင်.Hyde Park, St.Mary’s Cathedral, NSW Arts Galley များသို.လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ညနေခင်းတွင်ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းပေါ်မှနေဝင်ချိန်ကိုခံစားရင်းငါးဟင်းသုံးမျိုးဖြင်.တည်ခင်းမည်.အဆင်.မြင်.ညစာကိုသင်္ဘောပေါ်တွင်ပျော်ရွှင်စွာစားသောက်ပါမည်။ညစာစားသုံးပြီးနောက်ဟိုတယ်Check In ဝင်ပြီးအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 03 : Sydney - Wollongong – Sydney (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာစားသုံးပြီးနောက်တောင်ဖက်ရှိပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတလျောက်ကားဖြင်.ဖြတ်သန်းပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေမြို.ဖြစ်သည်.Wollongongမြို.သို.သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Bald Hill တောင်ပေါ်မှWollongongမြို.၏နာမည်ကြီး Hang Gliderစီးနင်းခြင်းကိုကြည်.ရှုနိုင်ပါမည်။ယင်းနောက် 665 meters ရှည်သည်.သမုဒ္ဒယာ ပေါ်မှဆောက်လုပ်ဆက်သွယ်ထားသည်. Sea Cliff Bridge ပေါ်မှလမ်းလျှောက်ဖြတ်သန်းရင်းအမှတ်တ၇ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်း၊နာမည်ကြီးAustimer Beach နှင်.သဘာဝကျောက်သားများဝန်းရံဖြစ်ပေါ်နေသည်.ရေကန်များသို.လည်ပတ်ပါမည်။ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာ.တောင်ဘက်ခြမ်းမျအကြီးဆုံးဗုဒ္ဒဘုရားကျောင်း Nan Tien Temple သို.သွားရောက်ပြီးသတ်သတ်လွတ်နေ.လည်စာသုံးဆောင်ပါမည်။
Wollongong ကမ်းခြေရှိသြစတြေးလျျနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဘီယာစက်ရုံ Five Islands Brewery သို.လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင်. ဘီယာမြည်းစမ်းနိုင်ပါမည်။ Wollongong ကမ်းခြေ၊Flagstaff Hill နှင်.ထူးဆန်းသည်. KiamaBlowholewတို.ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးဆစ်ဒနိသို.ပြန်လည်ထါက်ခံာပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်တံင်အနားယူအိပ်စက်မည်ဖြစ်ပါသည်
Day 04 : Sydney- Bluemountains- Sydney (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးပါကဆစ်ဒနီမြို့အနောက်ဘက် 100 ကီလိုမီတာခန့်အကွာတွင်တည်ရှိပြီးအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသောBlue Mountain National Park သို့တစ်နေတာသွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Skyway ခေါ်ကောင်းကင်ကြိုးရထားဖြင့် Three Sisters ကျောက်ညီအမသုံးဖော်တည်ရှိရာကျောက်တောင်သို့သွားရောက်ပြီး Australia နိုင်ငံ၏ Grand Canyon တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသည့်သာယာလှပသောမြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းကိုကြည့်ရှု့ခံစားရင်းအမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပါမည်။ Blue Mountains ပေါ်ကကမ္ဘာ.အမတ်စောက်ဆုံးရထားခရီးသွားရင်း ancient jamison valley ကိုကြည်.ရှုခံစားရပါမည်။
Australia နိုင်ငံ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောသားပိုက်ကောင်များကိုလည်းတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။တောင်ပေါ်မှ Cableကားစီးရင်းပြန်ဆင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို.နောက်ဆစ်ဒနီမြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။ Queen Victoria Building သို.လည်ပတ်ရင်းဈေးဝယ်ပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးပါကဟိုတယ်တွင်တစ်ညတာအေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
Day 05 : Sydney/Brisbane (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးပါကမဲဘုန်းလေဆိပ်မှ Brisbane မြို့သို့လေယာဉ်ဖြင်.ပျံသန်းရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Brisbane မြို.ရှိအထင်ကရ Story Bridge , မြို.တော်ခန်းမနှင်. ပါလီမန်များကိုလေ.လာပါမည်။ထို့နောက်ရွှေရောင်ကမ်းခြေဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသော (၈၀) ကီလိုမီတာရှည်လျားသည့်သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏နာမည်ကျော် Gold Coast မြို့သို့ကားဖြင့်သွားရောက်ပါမည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားခရီးသွားအများဆုံးလာရောက်လည်ပတ်ရာအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ရေလွှာလျှောစီးနိုင်သောကမ်းခြေများ၊လှပသောတူးမြောင်းများ၊မိုးပျံတိုက်ကြီးများ၊လှပသောသစ်တောကြီးများနှင့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ညနေခင်းကိုရှုစားနိုင်သောကလပ်နှင့်ဘားများတည်ရှိရာမြို့ဖြစ်ပါသည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးပါကရွှေရောင်လွှမ်းသော Gold Coast ကမ်းခြေတွင်အပန်းဖြေအနားယူရင်းမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာနေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ညနေခင်းတွင်ညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်တွင်တစ်ညတာအေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
Day 06 : Gold Coast (နံနက်စာ၊ညစာ)
နံ့နက်စာသုံးဆောင်ပြီးသြစတြေးလျျ၏အကြီးဆုံး Marine park သို.လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပြီးပိုလာဝက်ဝံအိမ်သို.သွားရောက်ပါမည်။ထို.နောက် Sea World သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Sea World သည် Gold Coast တွင်ထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။လင်းပိုင်များနှင့်ရေလွှာလျှောစီးပြပွဲများသည် Sea World တွင်အလွန်ထင်ရှားပါသည်။ကျွမ်းကျင်သောစကိတ်စီးသမားများ၏ကြိုးတန်းဖြင့်ရေလွှာစီးသရုပ်ပြခြင်း၊လင်းပိုင်ကလေးများကထောင်ပြထားသောကွင်းများအတွင်းသို့ခုန်ဝင်သရုပ်ပြခြင်းနှင့်သူတို့၏ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နှင့်နားထောင်နိုင်စွမ်းအားတို့ကိုအံ့သြဖွယ်မြင်တွေ့ရပါမည်။ထို့နောက် Sea World အတွင်းရှိရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကစားနည်းများစွာကိုပျော်ရွှင်လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးပါကဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ညတာအေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို.နောက်ကွင်းစလန်၏ရေပေါ် shopping center , Marina Mirage တွင်ဈေးဝယ်ပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်တွင်အနားယူပါမည်။
Day 07 : Gold Coast / Melbone-Phillip Island- Melbourne (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ)
နံ့နက်စာသုံးဆောင်ပြီးGoast Coast လေဆိပ်မှမဲလ်ဘုန်းသို.သွားရောက်ပါမည်။မဲလ်ဘုန်းလေဆိပ်တင်ကားလာရောက်ကြိုပြီးမြို့တွင်းလည်ပတ်ခြင်းအစီအစဉ်အဖြစ်မဲလ်ဘုန်းမြို့၏အထင်ကရနေရာများဖြစ်သောBourke Street Mall ၊Federation Square ၊St Paul's & St Patrick's Cathedrals ၊Town Hall ၊Queen Victoria ဈေး၊ Chinatown ၊Fitzroyဥယျာဉ်၊ the Gardens ၊theMCG၊အမျိုးသားတင်းနစ်စင်တာ၊ Flinders Street Station ၊ Southbank များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးအမှတ်တရဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးပါမည်။ထို့နောက် Phillip ကျွန်းသို.သွားရောက်ပြီးကျော်ကြားလှသည်. ပင်ဂွင်းငယ်များ၏ဓလေ.သဘာဝများကိုလေ.လာကြည်.ရှုပြီးမဲလ်ဘုန်းသို.ပြန်ပါမည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်တွင်တစ်ညတာအေချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
Day 08 : Great Ocean Road Tour via Apollo Bay( ( နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ)
မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်သဘာဝတရားကြီး၏တန်ခိုး၊သတ္တိနှင့်စွမ်းအားတို့၏အံ့မခန်းထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတို့ကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်ရန်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ဖောက်လုပ်ထားသော Great Ocean Road ခရီးကိုသွားရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှနတ်ဘုရားပုံစံကဲ့သို့ထူးခြားစွာပေါ်ထွက်နေသော (၁၂)တိုင်၊လေးကိုင်းသဏ္ဏာန်ဖြစ်ပေါ်နေသောကျွန်း၊ဆူးတောင်ပါသောဝေလငါးနှင့်မတ်စောက်သောကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှမြင်တွေ့ခံစားနိုင်သောကမ်းရိုးတန်းသဘာဝအလှတို့မှာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။
နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့သောနာမည်ကျော်လန်ဒန်တံတားကြီးနှင့်သဏ္ဌန်တူပင်လယ်ထဲသို့ကျိုးကျနေဟန်ကျောက်ဆောင်ကြီး၏အပိုင်းအစများကိုလည်းလေ့လာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်ကျော်ကြားလှသော Bells ကမ်းခြေနှင့်Apoloပင်လယ်အော်၊Lorne & Otway အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိသစ်တောကြီးများကိုလည်းလမ်းခရီးတစ်လျှောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။နေ့လည်စာများသုံးဆောင်ရင်းဓါတ်ပုံရိုက်နိုင်ရန်ရူခင်းလှပသောနေရာများတွင်ခဏရပ်နားပေးပါမည်။
Day 09 : Melbourne- Sovereign Hill- Shopping – Departure (နံနက်စာ၊နေ့လည်စာ၊ညစာ)
အမှတ်တရနေရာတွင်ဈေးဝယ်ခြင်းနှင်. အထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်ကိုကြည်.ရှုပြီးနောက်မဲဘုန်းသို.ပြန်ပါမည်။မဲဘုန်းတွင်ကမ္ဘ.တောင်ဘက်ရှိအကြီးဆုံးကာစီနိုကစားဝိုင်းများသို.လည်ပတ်ပါမည်။ညစာမတိုင်ခင်စိတ်ကြိုက် ဈေးဝယ်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။ညစာသုံးဆောင်ပြီးမဲဘုန်းလေဆိပ်မှဘန်ကောက်သို.ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။
Day 10 : Bangkok-Yagon
၉ရက် သြစတြေးလျ ခရီးစဉ်အတွက် ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
တစ်ဦးဈေးနှုန်း(တစ်ခန်းလျင်၂ယောက်) = 4200ဒေါ်လာ
luggage တစ်လုံးစီအတွက်တန်ဆာခပါဝင်သော (MelboureQSydenyQGold Coast) ပြည်တွင်းလေယာဉ်လက်မှတ်ခများ၊
ခရီးစဉ်စဆုံးအဆင်ပြေမှုရှိစေရန်မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်စကားပြောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (Tour Leader) လိုက်ပါစီစဉ်ပေးမှု၊
ဟိုတယ်များတွင် Mini-bar၊အခပေးရုပ်သံ (Pay TV) နှင့်တယ်လီဖုန်းအသုံးပြူကုန်ကျစရိတ်များ၊
အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ်များ၊ (ဥပမာ - သောက်ရေသန့်ဗူး၊အချိုရည်၊အဖျော်ယမကာခများ၊ဟိုတယ်တွင်အဝတ်လျော်ခများစသဖြင့်)
MySQL: 0.0003 s,0request(s), PHP: 0.0070 s, total: 0.0074 s, document retrieved from cache.